Dacwad ficil ah oo heerka koowaad ah oo ka dhan ah Apple si loogu daro kumbuyuutarka balanbaalis ee MacBook | Waxaan ka socdaa mac
Kiiboodhka balanbaalisku waa inuu ahaadaa (oo uu) aad ugu xumaadaa inuu sii wado ka hadalka. Aad ayay u xun tahay, in muddo dheer ka dib markii Apple ay ka saartay suuqa, dacwad ka dhan ah Apple oo ku saabsan ka mid noqoshada kumbuyuutarkan ayaa la aqbalay iyada oo aan loo eegin MacBookga haystay. Marka ugu yaraan ogeysiinayaa Verge kaas oo sheegaya in dalabka wuxuu daboolayaa dhammaan moodooyinka 'MacBook' Waxay ka muuqdaan kumbuyuutar balanbaalis ah.
MacBook-kii ugu horreeyay ee lahaa sharaf-darrada nasiib-darrada ah ee haysashada kumbuyuutarka balanbaalisku wuxuu ahaa 12-inji gadaal sanadkii 2015. Markii dambena wuxuu u yimid moodooyinka kale ee MacBook-ga, sida MacBook Pro iyo MacBook Air. In kasta oo aysan ahayn markii ugu horreysay ee dacwad u dhacdo xaqiiqadan, haddana waxaan ka hadli karnaa inay tahay markii ugu horreysay ee dacwadu dhacdo si wada jir ah ayaa loo soo bandhigaa.
Dacwadda waxaa qirtay garsoore Edward Dávila 8-dii Maarso ee California, laakiin waxaa la furay oo kaliya ilaa dhamaadkii usbuucii hore. Waqtigan xaadirka ah, dacwada ficilku wuxuu daboolayaa dadka ku iibsaday MacBook kumbuyuutar balanbaalis ah. toddobo gobol: California, New York, Florida, Illinois, Michigan, New Jersey, iyo Washington. Dacwadu waxay qeexaysaa in noocyada MacBookga ee ay saameeyeen ay ka mid yihiin 12-inch MacBook (oo la iibsaday intii u dhaxeysay 2015 iyo 2017), MacBook Pro (inta udhaxeysa 2016 iyo 2019) iyo MacBook Air (inta udhaxeysa 2018 iyo 2019). Sababta dacwadu waxay salka ku haysaa Apple iyadoo og inay kumbuyuutarka balanbaalisku cilladaysan yahay, xitaa wuxuu xusayaa isgaarsiin gudaha ah oo ka dhexeysa madaxda Apple taas oo mid ka mid ah uu ku yiri 'si kasta oo aan u dayo lipstick-ga aan isku dayo inaan ku dhejiyo doofaarkan, wali waa foolxumo » , Anoo tixraacaya kiiboodhka balanbaalis.
Shirkada sharciga ee dacwada bilowday waxay martiqaadeysaa qofkasta oo ka socda daafaha Mareykanka si ay uga mid noqdaan. In kasta oo xilligan ayan bilaabin nidaamyada ay ku noqonayso dalab Qaran.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Kombiyuutarada Mac » MacBook » Dacwadii ugu horeysay ee ficil ee ka dhanka ahayd Apple ee ku darista kumbuyuutarka balanbaalis ee 'MacBook'
Waxaan si daacad ah u jeclaa kumbuyuutarka, waxaan ku haystay 13 MBP 2017 oo waxaan u xiisay 16 MBP-ga 2019. Waxay ahayd mid aad u jilicsan qayb ka mid ah injineernimada, laakiin waxay ahayd farxad.